वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट iOS को लागि अपडेट गरियो आईफोन समाचार
आईप्याड समाचार | | एप्स स्टोर, आईओएस
माइक्रोसफ्टले अफिस स्टोर, वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्टमा यसको अफिस प्रोग्रामहरूको अपडेट अपडेट गर्‍यो। यी उत्पादकता अनुप्रयोगहरूले अब टिप्पणी सम्पादन, फाईल पुन: नामाकरण, पृष्ठ-देखि-पृष्ठ फ्लिपिंग, र अधिक। नयाँ आईओएस for, आईप्याड एयर २ र आईप्याड मिनी split मा स्प्लिट भ्यू मोडको लागि पूर्ण समर्थनको साथ वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्टमा भिन्न परिवर्तनहरू जारी गरिएको छ। साथै मल्टिटास्किंग, वायरलेस कीबोर्ड, स्थान सहित आईप्याडमा उपयोगी सर्टकटहरू र अन्य लाभहरू।
1 IOS को लागि शब्द १.१1.14 मा परिवर्तनहरू।
1.1 यस अपडेटमा नयाँ:
1.2 अन्य भर्खरका सुधारहरू:
2 IOS को लागी Excel १.१। मा परिवर्तन गर्नुहोस्।
2.1 यस अपडेटमा नयाँ:
2.2 अन्य भर्खरका सुधारहरू:
3 IOS को लागि PowerPoint १.१। मा परिवर्तनहरू।
3.1 यस अपडेटमा नयाँ:
3.2 अन्य भर्खरका सुधारहरू:
IOS को लागि शब्द १.१1.14 मा परिवर्तनहरू।
यस अपडेटमा नयाँ:
नयाँ फन्टहरू जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक हुन्छ: के तपाईं कागजातमा फन्टहरू हराउनुहुन्छ? शब्दले स्वचालित रूपमा तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्दछ जब तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ।
द्रुत रूपमा एक पृष्ठबाट अर्कोमा जानुहोस्: होल्ड गर्नुहोस् र ड्र्याग गर्नुहोस् सिधा तपाईंलाई आवश्यक पृष्ठमा जानको लागि।
फाईलको नाम बदल्नुहोस्: तपाइँ अब वर्ड कागजातलाई सिधा खोल्न वा भर्खरको ट्याबबाट नाम दिन सक्नुहुन्छ।
अन्य भर्खरका सुधारहरू:
द्वि-दिशात्मक र जटिल स्क्रिप्टि Language भाषाहरू: अब अरबी, हिब्रू र थाई भाषाको लागि द्वि-दिशात्मक पाठ सम्पादन र जटिल लेखन समर्थन गर्दछ।
कागजातहरूका लागि संरक्षित दृश्य: खुला कागजातहरूका लागि अनुमतिहरू।
सजिलो सेयरिंग: कागजात सम्पादन गर्नका लागि आमन्त्रित गर्नुहोस् र सबै अनुप्रयोग भित्रबाट नै उनीहरूलाई अनुमति दिनुहोस्।
आउटलुक एकीकरण: आउटलुक ईमेल सन्देशमा संलग्न कागजात सम्पादन गर्नुहोस्। जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, अद्यावधिक गरिएको कागजात नयाँ ईमेल सन्देशमा पठाउन तयार हुनेछ।
नयाँ भण्डारण विकल्पहरू: iCloud र अन्य अनलाइन भण्डारण सेवाहरूमा तपाईंको काम खोल्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्। (कम्तिमा आईओएस requires चाहिन्छ)
नयाँ टेम्पलेट्स - नयाँ पूर्वनिर्धारित टेम्प्लेटहरू मध्ये एक प्रयोग गरी छिटो उत्तम कागजातहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
शब्द ऐड-इन्स: तपाईंको कागजात बृद्धि गर्ने र तपाईंको उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्ने वर्डमा कार्यक्षमता थप्नुहोस्। (आईप्याड मात्र, आईओएस .8.2.२ वा पछिल्लो आवश्यक पर्दछ)।
IOS को लागी Excel १.१। मा परिवर्तन गर्नुहोस्।
टिप्पणीहरू थप्नुहोस् वा सम्पादन गर्नुहोस्: तपाईंसँग केहि भन्नु छ। अब यो गर्न सजिलो छ, किनकि तपाईं आईप्याडमा एक्सेलमा टिप्पणीहरू सिर्जना र सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै टिप्पणीहरू एक ठाउँमा: हेर्दै विश्वास गर्दैछ। आईप्याडमा नयाँ "टिप्पणीहरू" टास्क फलकमा सबैको टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्।
फाईलको नाम बदल्नुहोस्: अब तपाई एक्सेल स्प्रिडशिटलाई सिधा खोल्न वा भर्खरको ट्याबबाट नाम दिन सक्नुहुन्छ।
द्विदिशात्मक र जटिल स्क्रिप्टि Language भाषाहरू: अब द्विदिशात्मक पाठ सम्पादन र अरबी, हिब्रू र थाईका लागि जटिल लेखन समर्थन गर्दछ।
कागजातहरूको संरक्षित दृश्य: खुला कागजातहरूका लागि अनुमतिहरू।
आउटलुक एकीकरण: एक आउटलुक ईमेल सन्देश को लागी एक स्प्रेडशीट सम्पादन गर्नुहोस्। जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, अपडेट गरिएको स्प्रेडसिट नयाँ ईमेल सन्देशमा पठाउनको लागि तयार छ।
एक्सेल एड-इन्स: एक्सेलमा कार्यक्षमता थप्नुहोस् जसले तपाईंको स्प्रेडशिटलाई सुधार गर्दछ र तपाईंको उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्दछ। (आईप्याड मात्र, आईओएस .8.2.२ वा पछि आवश्यक छ)
IOS को लागि PowerPoint १.१। मा परिवर्तनहरू।
नयाँ फन्टहरू जब तपाईंलाई तिनीहरूको आवश्यक हुन्छ: के तपाईं कागजातमा फन्टहरू हराउनुहुन्छ? PowerPoint तिनीहरूलाई स्वत: डाउनलोड गर्दछ जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक हुन्छ।
फाईलको नाम बदल्नुहोस्: अब तपाई खोल्न वा भर्खरको ट्याबबाट पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनको नाम दिन सक्नुहुन्छ।
द्विदिशात्मक र जटिल स्क्रिप्टि Language भाषाहरू: अब द्विदिशात्मक पाठ सम्पादन र अरबी, हिब्रू, र थाई को लागी जटिल लेखन समर्थन गर्दछ।
आउटलुक एकीकरण: आउटलुक ईमेल सन्देशको साथ एक प्रस्तुतीकरण सम्पादन गर्नुहोस्। जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, अद्यावधिक प्रस्तुतीकरण नयाँ ईमेल सन्देश पठाउन तयार भयो।
नयाँ भण्डारण विकल्पहरू: iCloud र अन्य अनलाइन भण्डारण सेवाहरूमा तपाईंको काम खोल्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्। (न्यूनतम आईओएस requires चाहिन्छ)
स्लाइडको डिजाईन परिवर्तन गर्नुहोस्: तपाईको सामग्रीलाई तपाईको स्लाइडको डिजाईन बदल्ने बनाउनुहोस्।
क्यामेराबाट सम्मिलित गर्नुहोस्: तपाईंको प्रस्तुतीकरणमा क्यामेराबाट छविहरू र भिडियोहरू घुसाउनुहोस्।
वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्टमा हाल एप्पल वाच समर्थनको अभाव छ, नयाँ आईफोनमा टच थ्रीडीसँग उपयुक्त छैन, र अझै पनि डाउनलोड गरिएको आकार सुविधाका लागि अनुकूलित गरिएको छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » एप्स स्टोर » वर्ड, एक्सेल र आईओएसको लागि पावर पोइन्ट नयाँ सुविधाहरूको साथ अपडेट गरियो।
म एक्सेल अपडेट गर्न कोशिस गर्दैछु र डाउनलोड सुरु हुँदैन। समस्या यो हो कि, अब, मैले स्थापना गरेको एक्सेल यसलाई खोल्ने प्रयास गर्दा मात्र बन्द हुन्छ।
कसरी आईफोन ss को थ्रीडी टच र यसको पीक र पप कार्य गर्दछ